Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Ememe ihe nkiri ihe nkiri njem nlegharị anya ụwa niile bidoro n'October 21
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Ememe Nkiri Ihe Nleta Ihe Nleta Ụwa ga -emepe na Ọktoba 21
A na-emepụta GTFF, ememme ihe nkiri nlegharị anya njem nlegharị anya nke mbụ n'ụwa iji kwado ebe njem na akụ na ụba obodo dabere na njem.
GTFF bụ ndị njem nlegharị anya Canada na US na ndị isi ụlọ ọrụ ihe nkiri mepụtara ya.
GTFF na-amata ndị na-ese ihe nkiri mba ofesi na mmepụta ihe onyonyo nke na-ejikọ ọnụ ma na-eme ka amata ebe njedebe ụwa.
A ga -ekerịta akụkụ nke ego GTFF na ntọala ndị dị njikere ịkwado maka ụkpụrụ njem nlegharị anya.
Ememe Nkiri Ihe Nleta Ihe Nlegharị Anya n'ụwa (GTFF) bụ mmemme ihe nkiri nke na -egosi ihe nkiri nke nwere ikike ịkwalite mmata banyere ọrụ dị mkpa ebe ndị a na -eme na ihe ịga nke ọma nke sinima na telivishọn. A na-emepụta GTFF, ememme ihe nkiri nlegharị anya njem nlegharị anya nke mbụ n'ụwa iji kwado ebe njem na akụ na ụba obodo dabere na njem.
GTFF na-amata ndị na-ese ihe nkiri mba ụwa na mmepụta ihe ọdịyo nke na-ejikọ ọnụ ma na-eme ka amata ebe njedebe ụwa. N'ịbụ onye nkwupụta ozi dị ike na -akwalite, ọrụ GTFF gụnyere ụlọ ọrụ ihe nkiri ihe nkiri yana nzukọ ọmụmụ ihe na -enyocha njem nlegharị anya; na -akpali ndị na -ege ntị ime ihe nchebe dị mma.
Emepụtara 2021 GTFF Virtual Edition na mkpakọrịta na nkwado nke njem nlegharị anya Netherlands.
Ozi nke ememme ihe nkiri njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ bụ:
Ịnakwere ma kwụghachi ndị na -ese ihe nkiri njem nlegharị anya nke ọma.
Iji gosi ihe nkiri ọha na ihe nkiri banyere ebe njem na ngwaahịa.
Iji kwalite ọnọdụ ọhụrụ na ime ihe nkiri nke ndị njem.
Iji wepụta mmasị azụmaahịa ndị njem na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwaahịa ihe nkiri ndị njem.
Iji kpalie ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ihe nkiri ịtụgharị mbọ ha ma bụrụ ọkaibe n'ịme ihe nkiri.
Iji dọta uche nke ụlọ ọrụ na -emepụta ihe nkiri, mgbasa ozi, njem, na ọha na eze n'otu ikpo okwu.
Ịmepụta ọnọdụ maka ọdịnaya nkwado nke ukwuu.
Emepụtara GTFF site na ndị njem nlegharị anya Canada na US na ndị isi ụlọ ọrụ ihe nkiri nke nwere ngosipụta ama ama na Nkiri na Njem Nleta gụnyere nhọpụta na kọmiti na -ahụ maka ihe nkiri na njem.
Site na mmalite ụwa ruo emume onyinye, site na nyocha ruo ịkparịta ụka n'ichepụta ụlọ ọrụ, site na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ nke ndị ọka iwu mba ụwa na -akwalite, na ndị na -ekwu okwu na -enwu enwu, ohere iji gboo mkpa ndị sonyere iji ghọta nke ọma na ịbụ akụkụ nke omume kacha eme fim.
Ndị ọha, ihe nkiri na njem nlegharị anya ga -enwekwa ike nweta ozi mbụ na ozi sitere n'aka ndị isi njem nlegharị anya mba ofesi nwere ozi ebe ejikọtara ya na sinima na ihe nkiri.
Na mgbakwunye na Nhọrọ Ihe Nkiri Ememme, 2021 GTFF na-enye ohere ịnweta seminarị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma site na gurus ụlọ ọrụ wepụtara. Nzukọ ọmụmụ ihe maka ndị na -ese fim gụnyere ịwelite ego maka imepụta ihe, mgbasa ozi ihe nkiri, nkesa na ihe ndị bụ isi. Ọmụmụ ihe mmeghe nke na-ekpuchi ihe nkiri, ihe onyonyo na arụmọrụ igwefoto dị maka obodo ihe nkiri. Nzukọ ọmụmụ ebe njedebe site na Netherlands na Ogwe ndị njem na Uganda ga -eduga ma mechie ihe omume ozi.